Kuwe isihlabani somculo uBra Hugh | umthunywa
Home Ezokuzithokozisa Kuwe isihlabani somculo uBra Hugh
Kuwe isihlabani somculo uBra Hugh
IMBONI yomculo kweleSouth Africa isiphinde yalahlekelwa ngenye inkakha kudlula emhlabeni isihlabani somculo we-jazz, uHugh Masekela.
Linkakha idlule emhlabeni ileminyaka engu-78 ngemva kokuhlaselwa yisifo semvukuzane kusukela ngomnyaka ka-2008. Eminyakeni edluleyo bekungathi uyayinqoba impi yakhe lalesi sifo lokho ngo-2016 kudingeke ukuthi ahlinzwe njengoba imvukuzane ubususabalala emzimbeni.
Nyakenye uMasekela umemezele ukuthi kutholwe esinye isimilo ngemva kokuwa phansi ngesikhathi ehambele izwe laseMorocco ngoMabasa. Welatshwa ngoMpandula okwaholela ekutheni ame ekuhambeleni yonke imicimbi ayenxuswe kuyo.
Ngaphandle kokuba yinkakha yomculo uMasekela uzokhunjulwa ngendima ayidlala ngesikhathi kuliwa loHulumende wobandlululo kuleli langokuba ngumahlekisa.
Umdeni kaMasekela ushicilele isitatimende ngokudlula kwakhe emhlabeni ekhasini lakhe ku-twitter ngoLwesibili ekuseni. Uthe uzomemezela usuku lwenkonzo yesikhumbuzo losuku lomngcwabo ngokuhamba kwesikhathi.
Ngenyanga edlule ngoKhisimusi imboni yomculo ilahlekelwe inkakha yezingoma zothando uRobbie Malinga laye okuvele ukuthi ubelemvukuzane.
WATSHA TSOTSI: Umthetho wemali!